ယူနီ နဲ့ ကျွန်တော့ အထင် - IT-KOKO
ကျွန်တော် မနှစ်က ဒီအချိန်လောက်က ကျွန်တော့ ဘလော့ဖြစ်တဲ့ hanmyohtwe.com ကို ကျွန်တော် ယူနီကုဒ်ပြောင်းဖို့ စလုပ်နေပြီပေါ့။ အဲ့အချိန်မှာ မြန်မာ၃ က Standard ဖြစ်သွားလို့ဆိုပြီး ကျွန်တော် ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အရိုးစွဲနေတဲ့ ဇော်ဂျီ ကို တော်တော်လေး အချိန်ယူပြီး ပြောင်းခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်တွေအားလုံးကို ယူနီကုဒ် ပြောင်းရတော့တာပေါ့။ Converter တွေ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ ပြောင်းပြီးသွားတော့ ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ စစရေးခါစမှာ လူဖတ်မရတဲ့ မြန်မာစာတွေလို့ ပြောတဲ့ ဖောင့်တွေနဲ့ဆိုတော့ လာကြည့်တဲ့သူ မရှိသလောက်ကို ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ဇော်ဂျီရော ယူနီရော မြင်ရအောင် ထွင်လာတော့တာပေါ့။ ပြဿနာက ရေးထားတာကိုတော့ ဖတ်လို့ရတယ်၊ ကွန်မန့်ပြန်ပေးလို့မရဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့တုန်းက ကျွန်တော်လည်း CSS တွေ၊ font-face တွေ မသိသေးတော့ တော်တော်လေး လုပ်လိုက်ရတယ်။ သူများတွေက wordpress မှာ plugin တွေနဲ့သုံးနေချိန်မှာ ကျွန်တော်က Blogger မှာ တိုင်ပတ်နေတယ်လေ။ နောက်ပိုင်းတော့ သိတဲ့သူတွေ လိုက်မေးရင်းနဲ့ သိသင့်သလောက် သိသွားတော့ အစဉ်ပြေသွားတယ်။ ဖတ်တဲ့ သူတွေကတော့ မပြောတတ်ဘူးဗျာ။ ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး။ ဖတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာ အခုချိန်ထိပဲ။
ကျွန်တော့အနေနဲ့ ပြောချင်တာက အခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ မြန်မာယူနီကုဒ်ကို သိသင့်ပါတယ်။ အကျိုးအမြတ် ဘားမှမယူပဲ ကြိုးစားပြီး လုပ်နေတဲ့ သူတွေကိုလည်း အာနာပါအုံးလို့။ အခုဆိုရင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆိုဒ်မှန်သမျှ ယူနီကုဒ်ကို သုံးနေကြပါပြီ။ အားလုံးကလက်ခံထာတာ အလကားမဟုတ်ပါဘူး။ ဇော်ဂျီ သုံးလို့ကောင်းတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သုံးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် မသုံးချင်တော့ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော် ယူနီကုဒ်သုံးပြီး ရေးရင် အရူးကြီးပါ၊ ဘာတွေရေးနေမှန်းကို မသိဘူး၊ လူနားမလည်တဲ့ စာတွေရေးနေတယ် စတဲ့ အသံတွေ ကြားနေရတုန်းပဲ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက သူများလုပ်လို့ လိုက်လုပ်တာဆိုရင်တောင် လုပ်ရပ်က မှန်နေတယ်ဆိုရင် လိုက်လုပ်ရမှာပဲလေ။ ယူနီကုဒ်က ဘာတွေကောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့်သုံးသင့်တယ်၊ သုံးဖို့ ဘာလို့တိုက်တွန်းနေတာလဲဆိုတာ သိဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ မသိသေးလို့ မသုံးဘူးဆိုရင် အခုသိရင်တော့ သုံးမှာပေါ့နော်။
ကျွန်တော်သိသလောက် ပြောပြရရင် မြန်မာစာကို Standard ဖြစ်တဲ့ ဘာသာဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရတယ်။ ဘာလဲ Standard ဆိုတာ? ရှင်းရှင်းပြောရရင် မူတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Code Point တွေပေါ်မှာ အားလုံးတူတူညီညီနဲ့ စာလုံးတွေ စီထားတာပေါ့။ အဲ့ဒါတင် မကပါဘူး ယူနီကုဒ် စာလုံးစီပုံ (Encoding) နဲ့ ကိုက်ညီရပါမယ် ။Standard ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒီထက်ပိုပါတယ်။ ကျွန်တော်က လူပိန်းနည်းနဲ့ ပြောလို့ပါ။ ဘာတွေထူးလာမလဲ ဆိုတော့ Standard ဖြစ်တဲ့ ဖောင့်တွေကို နောက်ပိုင်း ထက်တဲ့ စက်တွေမှာ ထည့်ပေးလာလိမ့်မယ်။ ဘားမှသွင်းစရာမလိုဘဲ မြန်မာစာကို ဖတ်လို့ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်နီးချင်း ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းမှာတောင် ဖုန်းထဲမှာ ထိုင်းလိုပါပြီးသား။ မြန်မာကျတော့ မပါဘူး။ ဖုန်းတွေမှာဆို သူများစာတွေကို ကောာင်းကောင်းမြင်ရတယ် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစာဆို အတုန်းတွေဘဲ မြင်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ အကောင်းဖြစ်မိတယ်။
အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်နေတဲ့ ပန်းတိုင်ကို မြင်တွေ့နေရပြီလို့ ဆိုရပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယူနီကုဒ်ကို Apple, Ubuntu, Windows 8 တို့မှာ မြန်မာစာကို ကောင်းကောင်းကြီး Support ပေးနေပါပြီ။ မြန်မာစာကိုသာမက တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတွေကိုပါရလာတာကို တွေ့၇တော့ Unicode အကျိုး၊ Standard ကိုသုံးတဲ့အကျိုးကို ကောင်းကောင်းကြီးမြင်တွေရတော့မှာပါ။ Windows 8 မှာဆိုရင် Unicode ကို IE ရဲ့ Fallback အနေနဲ့ ပါလာတော့ နောက်ပိုင်း Windows 8 Tablet တွေမှာပါ ရလာဖို့က သေချာသလောက်ရှိနေပြီလေ။ နောက်တစ်ခုက Android. အခုဆိုရင် version 4.03 မှာ သေသေချာချာကြည့်လိုက်ရင် Zawgyi font တွေကို ကောင်းကောင်းမှန်မှန် မပေါ်တာတွေ့ရပါမယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ Unicode 5.0 ကို လက်ခံလာလို့ပါ။ မြန်မာ ယူနီကုဒ်တွေကလည်း Unicode 5.2 ကနေစပြီး Standard ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်မှာ မဟုုတ်သေးပါဘူး။ စိတ်မပူပါနဲ့ နောက်ပိုင်း သေချာပေါက်ရလာမှာပါ။ မယုုံမရှိနဲ့။
ကျွန်တော့အထင်တော့ အခုထက်ထိ Zawgyi က ရှိနေသေးပါတယ်။ မရှိလဲဖြစ်ပေမယ့် ရှနေပါသေးတယ်။ အထူူးသဖြင့် သတင်းဆိုဒ်တွေမှာဆို Zawgyi ကိုဘဲ သုံးနေကြသေးတယ်။ လူအများစု ဖတ်နဲ့ ဆိုဒ်တွေက Zawgyi ကို ဘဲသုံးနေတော့ ကြည့်တဲ့သူတွေကလဲ Zawgyi နဲ့ဘဲ ကြည့်တာပေါ့။ လူအများသုံးတဲ့ ဆိုဒ်တွေက ပြောင်းလဲရမှာ ကြောက်ပါတယ်။ သူတို့ဆီကို လူလာနည်းသွားမှာ ဆိုုးလို့ပါ။ သူတို့ဆိုဒ်ကို လာကြည့်သူတွေများမှ သူတို့ အတွက် အိုကေတာဆိုတော့ ပြောရခက်သား။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းအတွက် မကြည့်ဘဲ့နဲ့ အများအတွက်၊ Long term အတွက် ကြည့်ရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ Unicode သုံးတဲ့ဆိုဒ်ဆို လူမလာဘူးလို့၊ လာတဲ့သူနည်းသွားတယ်လို့ ပြောတဲ့လူတွေ မကြာခင်မှာ ရှိလာတော့မှာ မဟူတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Zawgyi ကနောက်ထက် Update လုပ်တော့မှာ မဟုတ်တော့သလို့၊ လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင် unicode ဖြစ်အောင်လုပ်တော့မှာပါ။ အဲ့အခါကျတော့မှ သုံးစရာ ဖောင့်မရှိ၊ စာမရိုက်တတ်ဖြစ်နေမှာ ဆိုုးလို့ အခုကတည်းက ပြောင်းသင့်တယ်လို့ပြောတာပါ။ အဲ့အချိန်မှ ပြောင်မယ်ဆိုရင် နောက်ကျနေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တုန်းက ပြောင်းခဲ့တာဘဲ။ အခက်အခဲမျိုဆုံးထဲက ပြောင်လာတာပါ။ အခုချိန်ကတည်းက ပြောင်ထားတော့ နောင်မှာ အသားကျပြီးသားဖြစ်နေပြီလေ။ ကျွန်တော်ဆို တော်တော်အသားကျနေပြီ။ Keyboard ကို Unicode ဘဲသွင်းထားတော့တယ်။ Zawgyi နဲ့ ရိုက်မယ့်အစား English လို့ ဘဲရိုက်ဖြစ်တယ်။ လုံးဝမရိုက်တော့ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် စာစရိုက်တတ်တာ Myanmar3 လက်ကွက်နဲ့ပါ။ သူများတွေ Zawgyi နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် လုံးလုံးမရိုက်တတ်တာပါ။ အခုမှ စာရိုက်တာများလာလို့ ကောင်းကောင်း ရိုင်တတ်သွားတာ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော် ရေးထားတာ တွေကို အခုအချိန်ထိ ဖတ်လို့ မရသေးဘူးဆိုရင် သင်ဟာ နောက်ကျနေပြီလို့။ ကျွန်တော်ရေးထားတာတွေကို ဘာတွေမှန်းမသိသေးဘူး။ မြန်မာစာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရင် သင်ဟာ လမ်းမှားရောက်နေပြီလို့။ ၂၀၁၂ အတွက် မြန်မာယူနီကုဒ် ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲလို့ သိချင်ရင်တော့ ဒီလင့် မှာသာသွားဖတ်ကြည့်ပါတော့ ကျွန်တော့ဆိုဒ်ကို အခုသုံးထားတဲ့ ဖောင့်ကတော့ Ours-Unicode ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ သုံးထားတာပါ။ ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသား စာတွေကိုပါ ရအောင်လုပ်ပေးထားလို့ပါ။ ပြည်ထောင်စု ဆိုတာလေးကို အလေးထားလို့ ကျွန်တော် ဒီဖောင့်လေးကို သုံးထားတာပါ။ ယူနီကုဒ်စရင်းမှာတော့ မတွေ့သေးပါဘူး။ Update မလုပ်သေးလို့ဘဲလား။ ယူနီကုဒ် စစ်စစ် မဖြစ်သေးလို့ဘဲလားတော့ မသိ. ကျွန်တော်ကတော့ သုံးနေတာ အားလုံးအိုကေနေတယ်။ ဒီလင့် မှာ ရှိပါတယ်။ သွင်းထားကြည့်ပါ။